जनजाति महासङ्घमा सर्वसम्मत नेतृत्व छनोटको प्रयास, कुन पदमा कसको उम्मेदवारी ? « Pahilo News
जनजाति महासङ्घमा सर्वसम्मत नेतृत्व छनोटको प्रयास, कुन पदमा कसको उम्मेदवारी ?
प्रकाशित मिति : 14 November, 2016 11:57 am
२९ कात्तिक । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार उद्घाटन गरेको एमाले भातृ सङ्गठन नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन लम्बिएको छ । नेतृत्व चयनका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि सम्मेलन लम्बिएको हो । शनिबार उद्घाटन भएको सम्मेलन दुई दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि नेतृत्व छनोटको विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि सम्मेलन लम्बिएको हो ।
महाधिवेशनले विधान र महासङ्घको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गरे पनि नेतृत्व चयनकै विषयमा कुरा नमिलेपछि सम्मेलन सोमबार पनि नटुंगिने भएको हो । महासङ्घको अध्यक्षका लागि पार्टीका केन्द्रीय सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र पोलिटब्युरो सदस्य पर्शुराम मेघी गुरुङ र पोलिट्ब्युरो सदस्य शेरबहादुर तामाङले दाबी गरेका छन् । यद्यपि तीनै जनाले सहमतिका लागि अधिकतम् प्रयास भइरहेको भन्दै सर्वसहमतिमा नेतृत्व छनोट गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘नेतृत्व चयन सर्वसम्मत रुपमा चयन गर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो,’ केन्द्रीय सचिव गुरुङले भने, ‘हामी सकेसम्म आजै नेतृत्व चयन गर्ने छौँ ।’
अध्यक्ष पदकै दाबी गरिरहेका तामाङले पनि नेतृत्व छनोट सर्वसहमतिमा गरिने जानकारी दिए । ‘आज दिनभरीमा हामी नयाँ नेतृत्व छनोट गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यो सर्वसहमतिमा हुनेछ ।’ महासंघको ६७ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि १५० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । पदाधिकारी निर्विरोध गर्ने प्रयास भइरहेकाले केही ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
आइतबारबाटै सुरु बन्दसत्रपछि खुला १० केन्द्रीय सदस्यका लागि महेन्द्र शेरचन, सुमन श्रेष्ठ, विजय गुरुङ, रत्न गुरुङ, परशु मेघी गुरुङ, हेमराज पुन, शेरबहादुर तामाङ, शरण राई, देवराज राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, कृपाशुर शेर्पा, ढकबहादुर थापा र टीकाराम चेम्जोङ लिम्बुको उम्मेदवारी परेको छ ।
यसैगरी १ नम्बर प्रदेशबाट आठ जना आवश्यक पर्नेमा १५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । १ नम्बर प्रदेशबाट तिलकुमार मेयाङ्बो, शिव गुरुङ, शेषराज माझी, भवानी खापुङ, सत्यनारायण चौधरी, कालु लामालगायतको उम्मेदवारी परेको छ ।
१ नम्बर प्रदेशबाट तीन महिला सदस्यका लागि आठ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सावित्री श्रेष्ठ, निर्मला राई, तारादेवी राई, चुना थापामगर र सूर्यकुमारी सुनुवारलगायतको उम्मेदवारी परेको हो ।
२ नम्बर प्रदेशमा भने चारै जना सर्वसम्मत भएका छन् । नरबहादुर स्याङ्तान, महेशप्रसाद चौधरी, रामललित मण्डल धानुक र गोपाल श्रेष्ठ सर्वसम्मत भएका हुन् । २ नम्बर प्रदेशको महिला दुई सदस्यमा सागरदेवी चौधरी र सीता गुरुङ सर्वसम्मत भएका छन् ।
३ नम्बर प्रदेशमा खुला आठ जना कोटामा २३ को उम्मेदवारी परेको छ । ३ नम्बरको खुलामा चित्रबहादुर लुंगेली, गोविन्दलाल माझी, राम आलेमगरलगायतको उम्मेदवारी परेको छ । यसैगरी महिला चार सदस्यीयमा ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
४ नम्बर प्रदेशमा खुला ६ मा आठ र महिला ३ मा चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ४ नम्बरबाट खिम थापा मगर, नरबहादुर थापा मगर र देउकाजी गुरुङलगायतको उम्मेदवारी परेको छ ।
५ नम्बर प्रदेशमा ६ जना खुलाका लागि सात जना भिडेका छन् । महिला तीन सदस्यका लागि भने सहमति भएको छ । ५ बाट महिला सदस्यमा शान्ता चौधरी, सिन्धु जलेशा बुढाथोकी र टीका समसेली मगर सर्वसम्मत भएका हुन् ।
६ नम्बर प्रदेशमा खुला तीन सदस्यका लागि ५ जना र महिला दुई सदस्यका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ६ नम्बरबाट सोनाम छिरिङ लामा, रेशम राना र टीका घलेलगायतको उम्मेदवारी परेको छ ।
७ नम्बर प्रदेशमा खुला तीन सदस्यका लागि चार र महिला दुईका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ७ नम्बरबाट नारदमणि राना, वीरबहादुर बुढाथोकी, फूलमाया तामाङ, कोइलीदेवी चौधरीलगायतको उम्मेदवारी परेको छ ।
निर्वाचित सदस्यबाट एक अध्यक्ष, सात जना प्रदेश उपाध्यक्ष, एक जना महिला उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, चार सचिव, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष छानिने छ ।